Olee otú Wepụ Ndi ana-akpo si iPhone ndabere (gụnyere iPhone 5 / 4S)
> Resource> iPhone> Olee wepụ Ndi ana-akpo si iPhone ndabere
Olee otú ị wepụ kọntaktị site na iPhone ndabere?
iPhone furu efu. Na-a WP7. Achọghị ida niile m na kọntaktị. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike ịnweta m kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara Archives? Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị nnọọ pụtara na-ha n'ime Address Book, ọ bụ mma karịa inwe ịjụ gburugburu n'ihi na nọmba ọzọ.
Nkwado ndabere na mpaghara Archive site iTunes na kọmputa gị nwere ike ghara anya, na ị na-adịghị ekwe ka wepụ ihe ọ bụla ọdịnaya site na ya. N'ezie, nke a apụtaghị gị ndabere faịlụ bụ-abaghị uru. Wepụ kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara, ị ga-mkpa iPhone kọntaktị ndabere extractor software.
I nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ), ọ bụrụ na ị ka na-achọ ihe ngwọta. A mmemme eme ka i nwee mfe wepụ kọntaktị site na gị iPhone ndabere na kọmputa, n'agbanyeghị ndị ọhụrụ iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ 3GS, ma ọ bụ ndị ọzọ ezinụlọ nsụgharị.
Download Wondershare Dr.Fone maka iOS n'okpuru, ma na-agbalị ya maka free!
Nzọụkwụ - Olee otú iji wepụ kọntaktị site na iPhone ndabere
Nzọụkwụ 1. Run usoro ihe omume & iṅomi gị iPhone ndabere
Ebe a na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ihe atụ.
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, na-agba ya na-ahọrọ "Iweghachite si iTunes ndabere faịlụ" n'elu nke mmalite window. Mgbe ahụ họrọ gị iPhone ndabere (Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu iDevice, ga-enwe ọtụtụ ndabere faịlụ), na iti na "Malite iṅomi" wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Nzọụkwụ 2. wepụ iPhone kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na Mac
Ebe a, niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na-egosipụta na ị nwere ike ihuchalu ha niile na nkọwa. Lelee na kọntaktị na pịa "Naghachi" zọpụta ya na kọmputa gị.
Ọ bụ n'ezie manụ ịjụ gburugburu n'ihi na nọmba na dee ha na a ekwentị otu otu. Ozugbo ọ na-eme gị, adịghị ọsọ ọsọ ime nke a, na-atụgharị ịchọta a ngwa ngwa ụzọ ịkwaga gị niile iPhone kọntaktị gị ọhụrụ ekwentị dị ka otu oge.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata natara kọntaktị azụ gị iPhone, i nwere ike iji Wondershare TunesGo ime ya ole na ole clicks.